Sina 2020 Amazon Best Seller upgraded Ultrasonic Pest Repeller Plug Pest Reject, Electric Pest Control, Bug Mouse Repeal factory sy mpanamboatra | Jinjiang
2020 Amazon Best Seller upgraded Ultrasonic Pest Repeller Plug Pest Reject, Fanaraha-maso ny Pest Electric, Bug Mouse Repactor
Volavola: Tsy tapaka
Faritra azo ampiharina: 150-200 ㎡
Vokatra: fonosana fitambarana moka elektrika
Mampiasà: fifehezana bibikely
Famaritana: tsy misy
Vokatra: Kitapo fitambarana moka elektrika
Fampiasana: fifehezana bibikely
Charger: Tsy mahakasika
Haben'ny takelaka: 9 * 5.5 * 2.5cm
Lanja afa-karatsaka: ≤0.5Kg
Hanitra: tsy misy
Karazan-bibikely: SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS, SPIDERS
Toerana niandohana: CN
Anaran'ny marika: OEM & ODM
Model Model: PR-09
Fonosana: Fonosana boaty miloko, boaty boaty packaing
Anaran'ny vokatra: Ultrasonic Pest Repeller
Karazana fanaraha-maso bibikely: Elektronika, karazana fanaraha-maso ny bibikely
Fampiasana: Trano + Hotely + Birao + Efitra fandriana + Resto
Manatsatoka: US & UK & EU Standard
Taratasy fanamarinana: CE / RoHS
Lanjany tokana: 0,200 kg
Karazana fonosana: fonosana boaty miloko, fonosana mahazatra no misy.
Habetsahana (sombin-javatra) 1 - 500 501 - 1000 > 1000
Est. Fotoana (andro) 10 12 Hifampiraharahana
[2020 Teknolojia farany indroa Chip]: Ity repeller ultrasonic peste ity dia mampiasa chip indroa farany indroa, mamoaka onja ultrasonika matanjaka sy mifantoka kokoa izay mahatonga ny bibikely sy ny biby mpikiky ho sarotra omena hery mihoatra ny teo aloha. Ity fatran'ny refes ultrasonika ity dia mety hanelingelina sy hanelingelina ny ati-doha sy ny rafi-pitabatabana mba handroahana haingana sy mahery ny ankamaroan'ny karazana bibikely toy ny totozy, moosy, antsa, moka, hala, kalalao, sns.
[Azo antoka & Momba ny tontolo iainana]: Tsy misy akora simika, tsy misy poizina, kely fanjifana herinaratra, tsy henoina ary azo antoka 100% ho an'ny olombelona sy ny biby fiompy, tsy mila manadio ny bibikely maty, tsy mila bateria ary mitahiry vola be, solon'ny tontolo iainana mampidi-doza poizina sy Spray, simika ary fandrika, tsy misy fofona ratsy sy faty.
[Mora ampiasaina]: Atsofohy fotsiny ao amin'ny faladiany herinaratra ny famonoana ultrasound control electronics. Hanomboka handroaka ny bibikely izy rehefa mirehitra ny jiro manga. Nasaina apetaho amin'ny alalàn'ny 30-50 santimetatra miala ny gorodona ny repeller ultrasonika amin'ny famonoana bibikely manidina sy 10-30 santimetatra avy amin'ny tany noho ny bibikely mandady.
[Fanaparitahana midadasika]: Ny Ultrasonic Pest Repeal dia mahomby hatramin'ny faritra 1600 SQ. Ampiasaina be ao an-trano, trano fanatobiana entana, birao, zaridaina, trano fandraisam-bahiny, sns. Satria tsy afaka miditra amin'ny rindrina sy zavatra mafy ny ultrasound, dia ilaina ny mametraka iray isaky ny efi-trano. Mikasika ireo faritra fitehirizana lehibe dia manolotra soso-kevitra hametraka fitaovana 2 na maromaro izahay.
[Milamina sy mandaitra]: Ny Ultrasonic Pest Repeller miasa miaraka amin'ny onjam-peo ultrasound ambany ambany, tsy misy tabataba ao amin'ny efitrano afaka mitaona anao sy ny biby fiompinao. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia afaka mahita ny valiny ao anatin'ny 3-4 herinandro! Avy eo isika dia afaka manao veloma ny bibikely sy ny totozy! Raha manana olana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Manantena izahay fa hatory tsara ianao ary hanana tontolo tsy misy bibikely.
Hery naoty: 5W
TOSIKARATRA herinaratra: AC 90 ~ 220V
Frequency ultrasonic tsy re: 25-65KHz
Faritra fandrakofana mahomby: 800- 1200 Sq. Ft./unit
Ahitana fonosana: fonosana 6
1. Tazomy ny elanelana amin'ny karipetra, ny lambam-baravarana ary izay fitaovana fanamafisam-peo mety hampihena ny vokany.
2. Ny isan'ny biby mpikiky sy ny bibikely dia mety hitombo ao anatin'ny andro vitsivitsy. Ary ny mpitsabo bibikely dia handroaka azy ireo tanteraka mandritra ny efatra herinandro eo ho eo.
3. Ara-dalàna raha hitombo ny totozy sy ny verinia amin'ny fiandohan'ny andro fampiasa satria miala amin'ny toeram-ponenana izy ireo taorian'ny fanafihan'ny ultrasonika. Ny fihenan'ny asan'ny bibikely dia tokony hitranga ao anatin'ny 2-3 herinandro.
4. Ny feo ultrasonic dia tsy afaka miditra amin'ny fanaka, ny arimoara na ny rindrina, mitazona toerana malalaka manodidina ilay faritra natsofohany. Mba hampitomboana ny vokany dia tokony hampiasa fitaovana maromaro ao amin'ny trano fanatobiana entana na efitrano maromaro ianao.
Teo aloha: 2020 New Product ultrasonic pest repeller mifehy ny voalavo voalavo voalavo voalavo amerikana EU UK AU US Plug
Manaraka: Amazon tsara indrindra amidy ultrasonic elektronika moka mpamono bibikely famonoana bibikely, mpiaro ny bibikely
Peller Plug Repeller
Low Power Magnetic Repeller Electronic Ultrason ...
2020 New Product ultrasonic pest repeller contr ...
Moka elektronika ultrasonic amidy tsara indrindra ...
Moka Cockrach Repeller Elektronik Ultrasoni ...
Fivarotana moka elektrika elektrika lafo indrindra ...
2018 Vokatra Vaovao Solar Powered Mole Repactor S ...
Adiresy: 1ère Floor, Building B, Zone B, Canbo Industrial Zone, No. 22, Zone Industrial II, Xia Village, Gongming Street, Distrikan'i Guangming New, Shenzhen